WARBIXIN: Kadib In Heshiiskii Nabil Fekir Ee Liverpool Uu Burburay Isaga Oo Tijaabada Caafimaadka Reds Maray, Wax Ka Ogay Xidigihii Hore Liverpool Tijaabada Caafimaadka Ugu Maray Ee Ay Iska Diiday. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Kadib In Heshiiskii Nabil Fekir Ee Liverpool Uu Burburay Isaga Oo Tijaabada Caafimaadka Reds Maray, Wax Ka Ogay Xidigihii Hore Liverpool Tijaabada Caafimaadka Ugu Maray Ee Ay Iska Diiday.
Kooxaha Liverpool iyo Lyon ayaa saacadii ugu danbaysay ee heshiiskii Nabil Fekir la dhamaystiri lahaa isku diiday waxayna taasi keentay in kooxda ree France ay war saxaafadeed rasmi ah ka soo saartay in heshiiskii Nabil ee Liverpool uu gabi ahaanba burburay inkasta oo la filayay in saacado kadib heshiiska lagu dhawaaqo.
Nabil Fekir waxa uu maray tijaabada caafimaadka Liverpool waxaana laga helay in uu dhibaato seeda jilibka ah qabo kadib dhaawac soo gaadhay sanadkii 2015 kii oo uu qaliin ugu baahday, waxayna kooxda Lyon iyo saxaafada dalka France maamulka kooxda Liverpool ku eedeeyeen in ay sababtan ku doonaysay in ay dib wada xaajood kale u furto.
Saxaafada dalka England ayaa ka duwan waxayna aaminsan yihiin in Liverpool ay iyadu iskaga baxday heshiiska Nabil Fekir maadaama oo ay ka walwalsanayd in dhaawac jilibka ah ee kaga soo baxay tijaabadii caafimaadku uu dhibaato u keeni karo.
Si kastaba ha ahaatee, wali dad ayaa aaminsan in heshiska Nabil Fekir aanu dhiman oo dib loo bilaabi karo koobka aduunka ee Russia marka uu soo dhamaado balse taasi ma aha wax ilaa hadda laga arkay Lyon ama Liverpool.
Haddaba maxaa ku soo dhacay ciyaartoydii ay Liverpool tijaabada caafimaadka marisay balse ay iska diiday in ay kooxdeeda ku soo biiraan sababo taam ahaansh la’aan ah awgeed?.
Sanadkii 2011 kii kooxda Liverpool ayaa si wayn u doonaysya in ay la soo saxiixato xidiga ree France ee Sylvain Marveaux kaas oo tijaabada caafimaadka u maray Liverpool, laakiin Reds ayaa baadhitaankii ku ogaatay in Sylvain Marveaux uu dhaawac qabay waxayna go’aan ku gaadhay in ayna la soo saxiixan.
Sylvain Marveaux ayaa markaas ku biiray kooxda Newcastle United laakiin saddex bilood kadib waxa uu u baahday qaliin feedhaha ah taas oo keentay in 38 kulan oo kaliya oo horyaalka Premier league ah oo uu saftay kooxda Newcastle United.
Waxaa markii danbe si buuxda u cadaatay in Liverpool ay gaadhay go’aankii ugu haboonaa markii ay ka laabtay saxiixii Sylvain Marveaux kaas oo baadhitaankii tijaabada caafimaadka ee Liverpool lagu ogaaday dhaawaca uu saddex bilood kadib qaliinka u maray.
Markale sanadkii 2014 kii ayay Liverpool heshiis la gaadhay xidiga kale ee ree France ee Loic Remy waxayna marisay tijaabada caafimaadka basle waxaa soo baxay in xaaladiisa taam ahaansho ee dhinaca wadnuhu aanu ahayn sidii ciyaartoy looga baahnaa wuxuuna markii danbe ku biiray Chelsea oo aanu waqti fiican ku qaadan.
Markii uu Chelsea ku biiray ee uu tijaabadii caafimaadka ee Liverpool uu ku dhacay ayu Remy saxaafaada kala hadlay sababtii uu Liverpool ugu hungoobay wuxuuna yidhi: “Waxaanu imid tijaabadii caafimaadka, wax walba wuu fiicnaa kadib iyagu waxay doonayeen in ay wax walba uu wadnahayga ku fiicnaa”.
Remy oo markaas sharaxaadiisa sii waday ayaa yidhi: “Waxay dalbadeen mid takhasus u leh wadnaha wuxuuna ninku sheegay in ayna iyagu boqolkiiba boqol isku waafaqsanayn in aan sii wadan karo ama in aan joojiyo kubbada cagta”.
Inkasta oo markii ay Liverpool doonaysay saxiixa Loic Remy uu xaalad qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa uu ku jiray waxay kaga laabtay xaalada wadnihiisa oo aan ka ciyaartoy ahaan u fiicnayn laakiin tan iyo markaas wixii ka danbeeyay waxa uu galay waayo ciyaareed oo mugdi badan iyo kooxo uu amaah ugu soo ciyaaray.
Laakiin in Liverpool ay go’aan ku gaadhay in ay Nebil Fekir kaga dhaqaaqday go’aan la mid ah xidigahan hore ayaa noqon karta mid aad u adag maadaama oo uu yahay xidig tayo sare leh isla markaana ay kooxo badan oo waa wayni doonayaan iyada oo waliba Bayern Munich ka mid ah kooxaha kula tartamayay.
Si kastaba ha haatee, sababta dhabta ah ee keentay burburka heshiiskii uu Fekir ayaa ah in taam ahaanshiisa uu shaki ka jiro gaar ahaan jilibka oo uu dhaawac halis ahaa ka soo gaadhay sanadkii 2015 kii iyada oo hadda lyon sheegtay in kabtankeedu uu kooxdeeda hogaamin doono xili ciyaareedka soo socda.